China Ukuqinisa umzi-mveliso weMesh kunye nabavelisi |Shengsong
Ukuqinisa iMeshisetyenziselwa ukuqinisa ikhonkrithi, yenzelwe iSANS 1024:2006 kunye neminye imigangatho yomgangatho wehlabathi.
Ukuqinisa iimethi zeMesh yeyona ndlela ixhaphakileyo yokuqiniswa kwangaphambili kwaye ifaneleke ngakumbi kulwakhiwo lwe-slab ecaba kunye neebhedi ezingaphezulu zekhonkrithi.Ezinye izicelo eziyiliweyo ziquka:
Ukugcina kunye neendonga zokucheba;
Imiqadi kunye neentsika;
Izinto eziphathekayo ezigangelwayo;
Izinto zekhonkrithi zangaphambili;
Idama lokuqubha kunye nokwakhiwa kwemipu.
Ukuqinisa iimethi zeMesh zinokuchazwa njengamashiti asicaba okanye agobileyo, ngokuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzi.
Ukomeleza ukuqiniswa kweMesh kunciphisa kakhulu ixesha lokwakha.
I-SANS 1024:2006 iimethi zelaphu ezikhethiweyo ziimethi ezidityanisiweyo zokuqinisa kwaye zinokucwangciswa ngokulula ngokubhekisele kuhlobo lwelaphu, imilinganiselo yeshiti kunye neekhowudi zeemilo ezigotywayo (Isalathisi bubunzima belaphu nge-kg/m2 × 100).
Ucingo olugogekileyo oluqengqelekayo olusetyenziswa kwilaphu elidityanisiweyo lwemesh lunamandla ophawu (0.2% yoxinzelelo lobungqina) ubuncinci be-485MPa xa kuthelekiswa ne-450MPa ye-tensile rebar ephezulu.Ilaphu lingasetyenziswa kuxinzelelo oluphezulu kune-high tensile rebar ekhokelela kugcino lwemathiriyeli ukuya kuthi ga kwi-8%.
Imiqulu yocingo oludityanisiweyo lokuqinisa ikhonkrithi, imigangatho, kunye neendlela, amacwecwe.
2.1m × 30m × ucingo Dia.4.0mm (umnatha 200mm × 200mm) wt/Roll 63.7kg + 1.5%.
2.1m × 30m × ucingo Dia.5.0mm (umnatha 200mm × 200mm) wt/Roll 95.0kg + 1.5%.
Ucingo oluthambileyo olunamacingo lokubopha olumnyama kulwakhiwo lwasekuhlaleni, 0.16mm – 0.6mm ucingo, 25kg/roll.
Ngaphambili: Ukwandiswa kweMesh yesinyithi
Okulandelayo: umzi-mveliso ngexabiso eliphantsi China Uhlobo lweRazor yoMnqamlezo kunye nocingo lwentsimbi lweMathiriyeli yokulwa neRazor Blade eBarbed Wire